တရုတ် 405w Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - Rixing Electronics
405W Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ရေစိုခံ 25 နှစ်အာမခံ TUV CQC UL၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုလာပြားအတွက် 15 နှစ်၊ ဥရောပနှင့် တောင်အမေရိကဈေးကွက်အများစုကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်တွင် သင်၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းကို ထုတ်လုပ်ရန် အခိုင်အမာတောင်းဆိုပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း ထုတ်ကုန်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာပြားများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ စိတ်ကြိုက် 405w Monocrystalline Bifacial Solar Panel ကို လက်ကားဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့် 405w Monocrystalline Bifacial Solar Panel ကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျှော့စျေး ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခုပင် တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အချိန်မီ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
1. Bifacial နည်းပညာသည် နောက်ဘက်ခြမ်းမှ စွမ်းအင်ကို 30% ï¼‰အထိ ထုတ်ယူနိုင်သည်
2. 1500V စနစ်အတွက် ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် လမ်းဆုံသေတ္တာ
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 390 395 400 405 410 415
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 40.25 40.35 40.45 40.55 40.65 40.7
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 48.3 48.45 48.6 48.75 48.9 49
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 10.3 10.45 10.5 10.6 10.7 10.8
Module E ciency Eff % 19.29 19.53 19.78 20.03 20.27 20.52
ဆိုလာဆဲလ် (အရေအတွက်/ပစ္စည်း/အတိုင်းအတာ)၊ 144(6*12+6*12)၊ monocrystalline၊ 5BB/9BB၊158.75*79.375mm
မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများ (L/W/H) 2018*1002*30mm
Module အလေးချိန် 26.5 ကီလိုဂရမ်
1. Bifacial နည်းပညာ
3. အလုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါထုတ်လုပ်မှု၊ ပျံ့နှံ့နေသော အဆက်အသွယ်ဆဲလ်နည်းပညာကြောင့်။
4. မီးခိုးမြူ သို့မဟုတ် တိမ်ထူသောနေ့များကဲ့သို့ အလင်းရောင်အားနည်းသော ဆက်တင်များအောက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်တန်းတုံ့ပြန်မှု၊ ပါဝါထွက်ရှိမှု ပိုမိုမြင့်မားသည်။
405W Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားကို အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်၊ ခြံ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံ၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
405W Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားတွင် ဤအင်္ဂါရပ်များ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 405W Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြား၏ လက်မှတ်။
hot Tags:: 405w Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ ကြာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ လိုင်းပိတ်၊ ဂရစ်ဒ်ပေါ်မှ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ , In Stock , Brands , Made in China , Price List , CE , 25 Years Warranty